ဖြိုးပြောပြပေးတဲ့ လက်ရှိဂျပန်အခြေအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ငွေကိစ္စ !!! - JAPO Japanese News
လာ 20 Apr 2020, 11:53 မနက်
မင်္ဂလာပါ မြန်မာနှစ်သစ်ကူးမှာ အမေစုရဲ့ဆုတောင်းစကားလေးနဲ့ပဲ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးသင်္ကြန်ရေမစိုရတဲ့ အတာပွဲမှာ မေတ္တာရေနဲ့အေးကြပါစေ။
ဒီတစ်ခေါက်ကတော့အခုလတ်တလော ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေး ဖြိုးသိသလောက်ပြောပြပေးပါမယ်နော်…
ဖြိုးကအရင်ကတည်းကသတင်းတွေကြည့်ဖြစ်၊ နားထောင်ဖြစ်ပေမဲ့၊ အခုကတော့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ပိုကြည့်ဖြစ်နေပါတယ်။ အလုပ်ကလည်းအခုထိ အိမ်မှာပဲလုပ်နေရတာဆိုတော့ ရထားစီးချိန်၊ ရုံးသွားဖို့ပြင်ဆင်ချိန်တွေ ပိုထွက်လာတော့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေလည်းပိုထွက်လာပါတယ်။
ဖြိုးရဲ့ဂျပန်စကားပြောကလည်း ပြောရလောက်အောင်မကျွမ်းကျင်သေးတာနဲ့ သတင်းတွေကြည့်ရင်းနဲ့ ဂျပန်စာလေ့လာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်လို့ပဲပြောရမလား။
အချိန်နဲ့အညီသတင်းတွေလွှင့်နေတာရော နောက်၊ နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကို အကုန် ဂျပန်လိုစာတန်းထိုးဖြစ်ဖြစ် နောက်ခံဂျပန်အသံနဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဘာသာပြန်ပေးထားပါတယ်။ ပြီးတော့ အရေးကြီးတဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့အပိုင်းတို၊ နိုင်ငံတကာပြည်တွင်းသတင်း ၆ မိနစ်စာလေးတွေက ပိုပြီးကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သတင်းဆိုတာကရှည်နေရင် ကြည့်ရတဲ့သူပျင်းသွားတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလိုလိုရင်းတိုရှင်းပိုင်းလေးတွေက အချိန်နည်းနည်းနဲ့ ပိုထိရောက်တယ်လို့ ဖြိုးကထင်ပါတယ်။
ဖြိုးကြည့်နေကြ သတင်းမီဒီယာတွေကတော့ NHK news, FNN, ANNNewsCH, テレ東　News တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေ ကြည့်လို့ရမရ သေချာမသိပေမဲ့၊ အကယ်၍ဂျပန်မှာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အကူအညီရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
သတင်းတွေအရဆို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ၊ အခုအချိန်ရောဂါမထိန်းချုပ်နိုင်ရင် သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ လူလေးသိန်းအထိရှိသွားလိမ့်မယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ဟောကိန်းထုတ်ထားပါတယ်။
ရောဂါကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်ဟာလည်း တိုကျိုမြို့မှာ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိုများလာပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရဆို တစ်သောင်းနီးပါးကပ်နေပါပြီ။ အဲ့အတွက် ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးကလည်း အခုလာမယ့် Golden week လို့ခေါ်တဲ့ ရုံးပိတ်ရက်ရှည်မှာ တစ်နေ‌ရာနဲ့တစ်နေရာခရီးမသွားကြဖို့ တတ်နိုင်သလောက်အိမ်မှာပဲနေဖို့ ပြောထားပါတယ်။
နောက်သတင်းတစ်ခုက အဝတ် Mask တွေကို တစ်အိမ်နှစ်ခုပို့ပေးတာတွေကို စနေပါပြီ။ တိုကျိုမှာကူးစက်ခံရသူပိုများတဲ့ Sedagaya, Shinjuku စတဲ့နေရာတွေကနေစတင်ပို့ပေးနေပြီးတော့၊ Mask နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရွယ်အစားသေးတယ် ဆိုပြီးဝေဖန်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အခုခေတ်စားနေတဲ့ ထောက်ပံ့ငွေယန်းတစ်သိန်းကိစ္စပါ။
၅ လပိုင်းတစ်ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး လကုန်လောက်မှာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ သတင်းအရဆိုရင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း(လျှောက်ရမယ့်နည်းလမ်း) နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Internet ကနေ form ဖြည့်တာရယ်ပါ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာနေရင် ရက်ကွက်ရုံးမှာစာရင်းပေးရပါတယ်။ အဲ့မှာ My number လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် number တစ်ခုရပါတယ်။ အဲ့ number ကနေတစ်ဆင့်လုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ငွေပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး mobile banking ကနေပေးတာမျိုးလုပ်မလားဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သက်ကြီးရွယ်ဆိုတွေအသုံးပြုဖို့ အခက်အခဲရှိနေနိုင်တာရော၊ နယ်တွေမှာအသုံးပြုဖို့ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးမလဲဆိုတာတော့မသိသေးပါဘူး။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ကူးစက်ခံရသူအများဆုံးဖြစ်တဲ့ တိုကျိုမှာ ကူးစက်ခံရသူလုံးဝမရှိတဲ့မြို့လေးရှိနေပါတယ်တဲ့…
福生　Fussa　လို့ခေါ်တဲ့၊ ဒုတိယအသေးဆုံးမြို့ပါ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်း ကျန်းမာလို့ချမ်းသာစွာ ရှိပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း……
Ice cube နဲ့ သက်တောင့်သက်သာစွာ နွေရာသီကိုကျော်ဖြတ်ရအောင် !!!
ရုတ်တရက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အသတ်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ ဂျပန်လည်းအန္တရာယ်ရှိနေပြီလား?